‘अर्गानिक’ स्याउ काठमाडौंमा, कहाँ पाइन्छ ? - Aarthiknews
‘अर्गानिक’ स्याउ काठमाडौंमा, कहाँ पाइन्छ ?
काठमाडौ। मनाङको भर्ताङमा उत्पादन भएको अर्गानिक स्याउको काठमाडौंमा ब्यवसायीक कारोबार शुरु भएको छ । एग्रो मनाङले उत्पादन गरेको स्याउको दशैंको घटस्थापनाबाट काठमाडौंमा व्यवसायीक कारोबार शुरु गरेको जनाएको छ ।
‘हिमालयन फ्रेस’ ब्राण्डको मनाङको स्याउ काठमाडौंमा जिके एण्ड सन्स एग्रो प्रा।लि।ले आधिकारिक रुपमा बिक्री सुरु गरेको हो । जिकेले मनाङ अर्गानिक स्याउको व्यवसायीक कारोबार सुरु गरेको एक महिना पूरा भएको छ । यसले काठमाडौँको सिता पाइलामा ‘कोल्ड स्टोर’ पनि संचालन गरेको छ । मनाङबाट आइपुगेको स्याउ स्टोरमा राखेर मागअनुसार बजारमा पुर्याउने गरेको छ । जिकेसँग लिएर काठमाडौँमा भाटभटेनी, बिगमार्टलगायत डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुले ठूलो परिणाममा स्याउ बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
जिकेले नेपालमात्रै नभएर कतार, मलेसिया र दुबईमा हिमाली फ्रेस ब्राण्डको स्याउ पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ । “नेपालमा सिजन नभएको बेला हामीले कतार, मलेसिया र दुबईमा पुर्याउने तयारीमा छौं । उताका व्यवसायी साथीहरुसँग कुरा भइरहेको छ । उनीहरुको माग ठूलो परिणाममा छ, त्यो अनुसार हामीले पुर्याउन सक्छौं की सक्दैनौ भन्नेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं”
चालिसेले भने । उनले कतारमा हुन लागेको विश्वकपमा समेत नेपाली स्याउ पुर्याउने तयारी भइरहेको छ ।एग्रो मनाङले भार्ताङमा ७३५ रोपनीमा गरेको स्याउ फर्म दक्षिण एसियाकै ठूलो मानिन्छ । यो वर्ष थप एकलाख स्याउका विरुवा रोप्ने तयारी भइरहेको छ ।